ပူချူန်းမြို့နေ ဒုက္ခသည် ၁၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်များ၏ ပဒေသာ ကပွဲ ကျင်းပပြီးစီး	ပူချူန်းမြို့နေ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ ဖမ်းဆီးခံရ (နောက်ဆက်တွဲ သတင်း) →	ပူချူန်းမြို့နေ ဒုက္ခသည် ၁၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ	Apr 21
ဧပြီ ၂၂ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ပူချူန်း ဒေသနေ မြန်မာဒုက္ခသည်များအား ယနေ့ နံနက် ၁၂ နာရီမှ စ၍ ဒေသခံရဲများနှင့် ကွာလာလမ်ပူရှိ အထူးရဲများ ပူးပေါင်း၍ စီမံချက်ဖြင့် ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုအချိန်ထိ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရသူ မြန်မာဒုက္ခသည်များ ၁ဝဝ ကျော်ခန့်ရှိပြီး အများစုမှာ ပူချူန်း၊ TESCO – ပန်းခြံ အနီးတဝိုက်ရှိ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံနေရသူများတွင် UNHCR ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများနှင့် RST စောင့်နေသူများလည်း ပါဝင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဤအကြောင်းရာနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများ ထပ်မံရရှိပါက ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ် အဖွဲ့ချုပ် (AAR) ၏ Hot line : 0321411332, 0162779365, 0129351251 သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးပို့ကြရန်နှင့် သတင်းများအား ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (မလေးရှား – UNHCR) သို့ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေဖြင့် အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွင် မလေးရှား UNHCR ရုံးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများကိုင်တိုင် ပါဝင်ပြီး ဒုက္ခသည် ကဒ် အစစ်အမှန် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုသည်ကို သေချာစေရန် ကဒ်စစ်ဆေးသည့် စက်များလည်း ပါဝင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted on April 21, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်များ၏ ပဒေသာ ကပွဲ ကျင်းပပြီးစီး	ပူချူန်းမြို့နေ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ ဖမ်းဆီးခံရ (နောက်ဆက်တွဲ သတင်း) →	Leaveacomment